Daniel 8 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Odwennini ne ɔpapo ho anisoadehu (1-14)
Abɛn ketewa bi maa ne ho so (9-12)
Kosi sɛ anadwo ne anɔpa 2,300 betwam (14)
Gabriel kyerɛɛ anisoadehu no ase (15-27)
Odwennini ne ɔpapo ho anisoadehu no nkyerɛase (20, 21)
Ɔhene bi a ne ho yɛ hu bae (23-25)
8 Ɔhene Belsasar ahenni afe a ɛto so abiɛsa mu no,+ me Daniel, mesan nyaa anisoadehu foforo.+ 2 Bere a minyaa saa anisoadehu no, mihui sɛ mewɔ Susan*+ abankɛse* mu wɔ Elam mantam mu.+ Anisoadehu no mu no, na mewɔ Asubɔnten Ulai no ho. 3 Memaa m’ani so hwɛe, na mihui sɛ odwennini bi+ gyina asubɔnten no ano, na na ɔwɔ mmɛn abien.+ Ná mmɛn abien no woware, nanso na baako ware sen baako; nea ɛware paa no na ɛbae akyiri yi.+ 4 Mihuu odwennini no sɛ ɔrehuruhuruw kɔ atɔe ne atifi ne anaafo, na aboa biara antumi annyina n’anim. Obiara nni hɔ a na obetumi agye obi afi ne nsam.+ Ɔyɛɛ nea ɔpɛ, na ɔmaa ne ho so. 5 Bere a migu so rehwɛ no, menkɔhwɛ a, ɔpapo bi+ na ofi atɔe fam* reba yi! Ɔkɔɔ asaase so baabiara, na na ne nan nka fam. Ná ɔpapo no wɔ abɛn kɛse bi tua n’ani ntam.+ 6 Ná ɔreba odwennini a ɔwɔ mmɛn abien no so, odwennini a mihui sɛ ogyina asubɔnten no ano no. Ɔde abufuw kɛse tuu mmirika kɔɔ odwennini no so. 7 Mihui sɛ ɔrebɛn odwennini no, na n’ani beree no so. Ɔpem odwennini no, na obubuu ne mmɛn abien no, na odwennini no annya ahoɔden a ɔde begyina n’anim. Ɔtow odwennini no kyenee fam tiatiaa no so, na na obiara nni hɔ a obegye no afi ne nsam. 8 Ɔpapo no maa ne ho so boroo so. Nanso bere a ɔyɛɛ den ara pɛ na abɛn kɛse no bui. Na mmɛn anan a ɛsoso fifi sii ɛno anan, na na mmɛn no ani kyerɛ atifi, anaafo, apuei, ne atɔe.*+ 9 Na abɛn foforo fii mmɛn anan no baako mu bae. Ná ɛyɛ ketewa, na ɛyɛɛ kɛse paa, na ɛde n’ani kyerɛɛ anaafo ne apuei* ne Asaase Fɛfɛɛfɛ no.*+ 10 Ɛyɛɛ kɛse ara koduu ɔsoro asafo no nkyɛn, na ɛmaa asafo no bi ne nsoromma no bi tetew beguu fam, na etiatiaa wɔn so. 11 Na ɛmaa ne ho so tiaa asafo no Safohene no, na woyii ade a wɔyɛ no daa* no fii Safohene no anim, na wɔtow ne tenabea kronkron a etim hɔ no kyenee fam.+ 12 Na mmarato nti, wɔde asafo no ne ade a wɔyɛ no daa* no hyɛɛ ne nsa, na ɛtow nokware kyenee fam; ɛkekaa ne ho, na esii no yiye. 13 Na metee sɛ ɔkronkronni bi rekasa, na ɔkronkronni foforo bisaa ɔbaako a ɔrekasa no sɛ: “Ade a wɔyɛ no daa,* ne mmarato a ɛde amamfoyɛ ba,+ ne kronkronbea ne ɔsoro asafo* a wobegyaw ama wɔatiatia so no ho anisoadehu no bɛkɔ so akosi da bɛn?” 14 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: “Ɛbɛkɔ so akosi sɛ anadwo ne anɔpa 2,300 betwam. Na sɛnea ɛte biara, wɔbɛma kronkronbea no asi ne dedaw mu bio.” 15 Bere a me, Daniel, migu so rehwɛ anisoadehu no a mepɛ sɛ mete ase no, prɛko pɛ na mihui sɛ obi abegyina m’anim. Wohwɛ no a, ɔte sɛ ɔbarima. 16 Ɛnna metee onipa bi nne fii Asubɔnten Ulai no mu,+ na ɔteɛɛm sɛ: “Gabriel,+ ma oyi nte nea wahu no ase.”+ 17 Enti ɔbaa baabi a na migyina no. Bere a ɔbae no, mebɔɔ hu paa, enti mede m’anim butuw fam. Ɛnna ɔka kyerɛɛ me sɛ: “O, onipa ba, te ase sɛ anisoadehu no fa awiei bere no ho.”+ 18 Bere a ɔne me rekasa no, medae hatee, na na m’anim butuw fam. Enti osoo me mu, na ɔsan de me gyinaa baabi a na migyina no.+ 19 Na ɔkae sɛ: “Hwɛ, merema woahu nea ɛbɛba wɔ abufuw bere no awiei, efisɛ ɛfa awiei bere a wɔahyɛ no ho.+ 20 “Odwennini a wuhuu no a ɔwɔ mmɛn abien no gyina hɔ ma Media ne Persia ahemfo.+ 21 Ɔpapo a ne ho nwi bebree no nso gyina hɔ ma Greece hene.+ Na abɛn kɛse a ɛwɔ n’ani ntam no gyina hɔ ma ɔhene a odi kan no.+ 22 Na abɛn a ebui a mmɛn anan fifi sii ananmu no nso,+ nea ɛkyerɛ ne sɛ, ahenni anan befi ne man no mu aba, nanso wɔn ahoɔden rennu ne de no. 23 “Na wɔn ahenni no awiei, bere a mmaratofo nneyɛe adu ne mpɔmpɔnso no, ɔhene bi a ne ho yɛ hu a ɔte ahintasɛm ase* bɛba. 24 Ne tumi bɛyɛ kɛse, nanso ɛnyɛ n’ankasa ahoɔden na ɛbɛma aba saa. Ɔbɛsɛe ade aboro so, na nea ɔbɛyɛ nyinaa bɛyɛ yiye. Ɔbɛsɛe ahoɔdenfo ne akronkronfo no nso.+ 25 N’anitew nti, ɔbɛfa nnaadaa so adi nkonim. Ɔbɛma ne ho so wɔ ne koma mu; na ɔbɛsɛe nnipa bebree wɔ asomdwoe bere mu.* Ɔbɛsɔre atia ahemfo mu Hene no mpo. Na wɔbɛsɛe no, nanso ɛnyɛ onipa nsa na ɛbɛyɛ. 26 “Anadwo ne anɔpa ho asɛm a wɔkae wɔ anisoadehu no mu no yɛ nokware. Nanso wo de, mmɔ anisoadehu no so nkyerɛ obiara, efisɛ ɛyɛ daakye asɛm.”+ 27 Me, Daniel, meyɛɛ mmerɛw, na meyaree nna pii.+ Afei mesɔre kɔyɛɛ ɔhene adwuma no.+ Nanso nea mihui no nti, meyɛɛ titirii, na obiara ante nea mihui no ase.+
^ Nt., “ani kyerɛ ɔsoro mframa anan no.”
^ Asɛmfua “asafo” no betumi akyerɛ owia, nsoromma, ne nea ɛkeka ho. Ebetumi nso akyerɛ ɔsoro abɔfo.
^ Anaa “ɔhene bi a waben wɔ sɛnea wɔbɔ nkurɔfo ho pɔw mu.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “bere a ɔmmɔ kɔkɔ.”